Thu Ta Myay - Page 30 of 85 - True News and Knowledge
ကြိုက်တဲ့စာအိတ်ရွေးပါ..ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဖတ်ကြည့်လိုက် သင်ရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြပေးလိုက်မယ်….
October 2, 2020 mgthuta
ကြိုက်တဲ့စာအိတ်ရွေးပါ..ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဖတ်ကြည့်လိုက် သင်ရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြပေးလိုက်မယ်
၁။ ဒီစာကို ဖတ်နေသူရေ, တစ်ခါတစ်လေမှာ မင်းဟာ အောင်မြင်မှာပါ ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မယုံကြ တာမျိုး ရှိ တတ်ပါတယ်။ သူတို့တောင် မအောင်မြင် ခဲ့တာကို မင်းအောင်မြင်မယ်လို့ ဘယ်သူမှ မထင်တာ ဒါသဘာဝ ပါပဲ …။
မင်းတစ်ခုခု အမှားလုပ်မိတဲ့ အခါဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ ဟဒါသထွက်နေတဲ့ အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ် မင်းကို အရှုံးသမားလို့ လူတွေက ပြောကြ လိမ့်မယ်။ သူတို့ မင်းကို မနာလိုလို့ ပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင် တာပဲ …။
ပြောတဲ့သူဟာ မင်းရဲ့ မိသားစုဝင်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို သူငယ်ချင်းလဲ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းမနည်းပါနဲ့။ မင်းတကယ် အရှုံးမပေး သရွေ့ မင်းမရှုံး ပါဘူး။ မင်းဟာ တစ်နေရာရာမှာတော့ အောင်မြင် မှာပါ။ ယုံကြည်ချက် ခိုင်ခိုင်ထားပါ။ မင်းဟာ မင်းထင် တာထက် လေးစားစရာကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါနော် …။
၂။ ဒီစာကို ဖတ်နေသူရေ, မင်းက လူတိုင်းကို သနားကြင်နာ တတ်တယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းကိုယ်မင်း ဒီလိုဖြစ်နေ တာကို မကြိုက်ဘူးမလား။ မင်းပေးတဲ့ အချစ်အတိုင်း ပြန်မရတာများလို့ လေ။ ဒါပေမယ့် မပြောင်းလဲလိုက်ပါနဲ့ …။
မင်းဟာလူတွေ လုပ်နိုင်ခဲတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေသူပါ။ အလကားလုပ်ယူလို့ရတဲ့ ကြင်နာမှု၊ ဖေးမမှုကိုတောင် တွန့်တိုနေတဲ့ လောကကြီးမှာ မင်းက ရက်ရောတဲ့ မေတ္တာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်နေရတာ ဂုဏ်ယူ လိုက်စမ်းပါ …။
တစ်ချိန်ချိန်မှာ မင်းချစ်တာ ထက်တောင် မင်းကို ပိုချစ်မယ့်သူတွေ တစ်ယောက်မက ပေါ်လာ ပါလိမ့် မယ်။ ကြင်နာမှု ဆိုတာ ရောင်ပြန် ဟပ်ပါတယ် …။
၃။ ဒီစာကို ဖတ်နေသူရေ, မင်းဟာ ဟန်ဆောင်ကောင်း နိုင်သူကြီး တစ်ယောက်ပါ။ လူတွေက မင်းကို ခံစားချက်မရှိ အေးစက် စက်ကြီးလို့ ထင်တတ် ကြတယ်။ အမှန်တော့ မင်းက ကြင်နာတတ်တဲ့ သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် …။
ဒါပေမယ့် မင်းလူ့လောကကြီးရဲ့ အမှောင်ဘက်ခြမ်းကို မြင်ခဲ့လိုက်ရတဲ့ အတွက် မင်းလူတွေကို စိတ်ပျက်ပြီး အဖက် မလုပ်ချင်တော့ ဘူး။ မင်းပေးခဲ့တဲ့ အနစ်နာခံမှုတွေ နှလုံးသားတွေကို လူတွေက နင်းခြေဖျက်စီး ပစ်တာကို ခံခဲ့ ရတယ် …။
အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကို မင်းအတွင်း စိတ်ထဲမှာ သိုသိပ်ထား ရတဲ့ အတွက် မင်းက လောကဓံကို တောင့်ခံနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေ ပါပြီ၊ မင်းဟာ ဘယ်သူဖြိုဖြို မပြိုနိုင်တဲ့ တောင် တစ်လုံးဖြစ်နေ ပါပြီ …။
မင်းဟာ သေချာပေါက်အောင်မြင်မယ့် လူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့မှာ မင်းရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက ဒဏ်ရာ အမာရွတ်တွေကို “အရမ်းနာခဲ့ မှာပဲနော်..” လို့ပြော လာမယ့် လူတစ်ယောက် မင်းဆီရောက်လာ ပါလိမ့် မယ်နော် ..။
၄။ ဒီစာကို ဖတ်နေသူရေ, မင်းအကြားချင်ဆုံး စကားတွေကို ဘယ်သူမှ မပြောပေးကြဘူးမလား။ အခု ငါပြောပြ မယ် မှတ်ထား …. မင်းဟာ သူငယ်ချင်းကောင်း ပီသတဲ့ သူပါ။ မင်းဟာ ဘာမှပြင်စရာ မလိုတော့အောင် ပြီးပြည့် စုံနေပါပြီ။
မင်းအပြုံးက လူတွေကို ပျော်စေတယ်။ မင်းဟာ တစ်ဖက်သားကို စာနာတတ်တယ်။ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပေး တယ်။ မင်းကို ချစ်ကြ တယ်။ မင်းကို ဂရုစိုက် ကြတယ်။ မင်းကလည်း လူတွေကို ပြန်ဂရုစိုက်ပေးတယ်။
မင်းဟာ သိပ်ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူပဲ။ မင်းဟာ လောကကြီးကို နေချင်စဖွယ် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ။ အဲ့ဒီ အတွက် လောကကြီးက ကျေးဇူးတင်နေ ပါတယ်။ ဆက်ပြီး ကြိုးစားပါ …။
၅။ ဒီစာကို ဖတ်နေသူရေ, မင်းဟာ လူတစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိနေ တယ်လို့ ထင် တယ်။ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် လုပ်မနေ ပါနဲ့။ ပြောစရာ ရှိတာပြောချ လိုက်ပါ။ အချိန်တွေက သွားနေတာနော် ရပ်နေတာ မဟုတ် ဘူး။ အချစ်မှာ ကျားမ မရှိပါဘူး …။
အသည်းနှလုံး ရှိသူတိုင်း ချစ်ကြတာပဲ၊ ရှက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ သူမင်းကို ငြင်းလည်း ငြင်းပေါ့။ မင်းဘဝကို အလင်းရောင်ပေးပြီး နွေးထွေးပေးမယ့် လူက ဒီလောက ကကြီးမှာ ရှိကို ရှိတယ်။ ဒီတစ်ယောက်မှ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သတိရပါ။ အဓိက မင်းဖွင့်ပြောဖြစ်ဖို့ပဲ။ ဒါမှ မင်းနောင်တရရမယ့် အဖြစ်တွေ မရှိပဲ ဘဝကို ရှင်သန်နိုင်မှာပါနော် …။ ။
ဒီကနေ့နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်ကို ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးမှာ စတင်ရုံးထုတ်
နှင်းဆီပါတီလို့ လူသိများတဲ့ UDP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်ကို မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးမှာ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်မှာ စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးကျော်မြင့်ဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ အကျဉ်းကျနေစဉ် အကျဉ်းထောင်ပြင်ပမှာ ဆေးကုသနေတုန်း ထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့် အဲဒီအမှုနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ပန်းလှိုင်အိမ်ယာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်မြင့်ကို နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့က ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ (၂၂၄) ဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အခုအခါ မန္တလေးမြို့ အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဦးကျော်မြင့်ကို ရုံးထုတ်တဲ့အခါမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား အများအပြားနဲ့ လုံခြုံရေး ယူထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ- Kaung Zaw Hein / MPA
ယနေ့ မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးမှ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရသည့် ဆရာဝန်(၂)ဦး နှင့် Nurse (၁)ဦး ရောဂါပိုးကင်းစင်၍ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရ
ကိုဗစ်Positive ဖြစ်ခဲ့သော မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဆရာဝန် (၂) ဦး နှင့် Nurse (၁)ဦး Negative ပြန်ဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးကင်းစင်သွား၍ ယနေ့
(2.10.2020)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၁၂:၁၀)က ကျန်းမာစွာဖြင့် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရပါပြီ။
ဆရာဝန် (၂) ဦး နှင့် နာ့စ် (၁)ဦးတို့အား သမားတော်ကြီးများ၊ ဆရာမများ မှ အားပေးစကားပြောကြားကာ ဂုဏ်ပြု။ဆုငွေများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ခွန်အားရှိပြီး မြန်မြန်ကျန်းမာလာအောင် နေ့စဉ်အဟာရများ ချက်ပြုတ်ပေးပို့ လှူ ဒါန်းနေသော သာသနာနွယ်ဖောင်ဒေးရှင်းဆရာတော် အရှင်စန္ဒဇောတိကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စွာ ကန်တော့၍ ပျော်ရွှင်စွာကျန်းမာစွာ ဆေးရုံဆင်းခဲ့ပါသည်။ မွန်ပြည်နယ် အနေနဲ့ ကိုဗစ် ကို မြန်မြန်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။
*ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အတွဲလေးတွေ လက်ထပ်မိရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာ၊ စီးပွါးမတက်တာ၊ ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်လို့လည်း အယူရှိပါတယ်
*သမီးရည်းစား ချစ်သူဘဝမှာ ဘာနေ့သား၊ ဘာနေ့သမီး ဆိုတာတွေက သိပ်အရေးမကြီးပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးအတွက်ကတော့ နေ့နံတွေက အရေးကြီးလှပါတယ်။
မြန်မာ အယူအဆမှာတော့ ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ ဆိုပြီးလက်တွဲဖို့ မသင့်တော်တဲ့ မောင်နှံလေးတွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အတွဲလေးတွေ လက်ထပ်မိရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာ၊ စီးပွါးမတက်တာ၊ ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်လို့လည်း အယူရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အစွမ်းထက်တဲ့ ယတြာတွေနဲ့ ကာကွယ်လို့ ရတာမို့ Marry ရဲ့ မောင်နှံလေးတွေထဲက ဓမ္မာ၊ သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အတွဲလေးတွေအတွက် အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေး သာယာစေဖို့ အတွက် အစီအရင် ယတြာလေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
*စနေနေ့နံ သားသမီး နဲ့ ကြာသပတေးနေ့နံ သားသမီး အိမ်ထောင်ပြုချင်ပါက
*ပိတောက်သား နဲ့ (၁၂)လက်မ အလျားရှိ သစ်သား (၂)ခု ကို ရွှေချ ပြီး ထိပ်အသီးသီး မှာ ဖဲကြိုးနီ နဲ့ ရစ်ပတ်ကာ မင်္ဂလာမောင်နှံ နေတဲ့အခန်း (သို့) နေအိမ် ရဲ့ အမြင့်တစ်နေရာ မှာ ပူးတွဲ ချိတ်ဆွဲ ပေးထားပါ ။
*တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် (၁၁)နာရီ (၄၅)မိနစ် မှာ ပြုလုပ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
*တနင်္လာနေ့နံ သားသမီး နဲ့ သောကြာနေ့နံ သားသမီး အိမ်ထောင်ပြု ချင်ပါက
*(၈) လက်မ ရှိတဲ့ ကသစ်သား (၂)ချောင်းကို ဖြတ်ပြီး ရွှေချကာ ဖဲကြိုး အဝါ ဖြင့် ပူးတွဲ ချည်နှောင်ကာ မင်္ဂလာမောင်နှံ နေတဲ့အခန်း (သို့) နေအိမ် ရဲ့ အမြင့်တစ်နေရာ မှာ ပူးတွဲ ချိတ်ဆွဲ ပေးထားပါ ။
*တနင်္လာနေ့ မနက် (၆) နာရီ (၂၀) မိနစ် မှာ ပြုလုပ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
*တနင်္ဂနွေနေ့နံ သားသမီး နဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံ သားသမီး အိမ်ထောင်ပြုချင်ပါက
*(၅) လက်မ အလျား ရှိတဲ့ ဝင်အူသားသစ်(၂) ချောင်း ကို ရွှေချကာ အပြာရင့်ရောင် ဖဲကြိုးနဲ့ ပူးတွဲချည်နှောင်ပြီး မင်္ဂလာမောင်နှံ နေတဲ့အခန်း (သို့) နေအိမ် ရဲ့ အမြင့်တစ်နေရာမှာ ပူးတွဲ ချိတ်ဆွဲပေးထားပါ ။
*ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲ (၁)နာရီ (၄၅) မိနစ် မှာ ပြုလုပ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
*ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံ သားသမီး နဲ့ အင်္ဂါနေ့နံသားသမီး အိမ်ထောင်ပြု ချင်ပါက
*(၅) လက်မ အလျားရှိတဲ့ ဝင်အူသား သစ်(၂)ချောင်း ကို အစိမ်းရောင် ဖဲကြိုး နဲ့ ပူးတွဲ ချည်နှောင်ပြီး မင်္ဂလာမောင်နှံ နေတဲ့အခန်း (သို့) နေအိမ် ရဲ့ အမြင့်တစ်နေရာမှာ ပူးတွဲ ချိတ်ဆွဲပေးထားပါ ။
*အင်္ဂါနေ့ မနက် (၉) နာရီ (၉)မိနစ် မှာ ပြုလုပ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆီးချို သွေးချိုရောဂါဆိုသည်မှာ အသက်အရွယ်မရွေး ကျား မ တိုင်း ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သလို မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သွေးတွင်း သကြားဓာတ်များခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆီးချို သွေးချိုရောဂါက လူတွေကို မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အပြင် တစ်ချက်လေးမှားလိုက်တာနဲ့ လူတွေရဲ့ အသက်ကိုပါ ဆုံးရှုံးထိခိုက်သွားစေနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုတက်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုတွေပြင်းထန်စွာ ခံစားရလည်း ဆိုတာ ထို ရောဂါဆိုးကြီးကိုခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ဆီးချိုတက်လာရင် ခေါင်းမထူနိုင်လောက် အောင် ဆိုးရွားပြီး ဘာမှလည်း စားလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ်လို့ ထင်တဲ့ ဆေးနည်းကောင်းလေးတစ်လက်ကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့် ကိုဗစ် ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ သူ့ဇနီးတို့ကတော့ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံလိုက်ရပီဖြစ်ပါတယ်။ ထရမ့်၏ အနီးကပ်လက်ထောက် မစ္စဟုပ်ဟစ် ထံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတနှင့်ဇနီးအားထံတွင်လည်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဖြစ်စဉ်မှာ သင်ခန်းစာ ယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇၂ နာရီအကြာက သမ္မတလောင်း ဒီဘိတ် မှာတောင် ထရန့်က ပြိုင်ဘက် ဘိုင်ဒန်ကို Mask တပ်လို့ဆိုပီး ခနဲ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုတော့ သူပိုးကူးစက်ခံနေရပါပီ။
ထရန့်ဟာ ကိုဗစ် ကို အများကြီး အလေးမထားခဲ့ပါဘူး။ ဇန်နဝါရီထဲက အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးက သူ့ကို တင်ပြခဲ့သလို ဆေးပညာအထူးအဖွဲ့ကလဲ ဖေဖော်ဝါရီမှာ သူ့ကို လူသန်းချီကူးစက်နိုင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပေမယ့် သူက ပြည်သူကို ထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား သူပြောခဲ့တာက ကိုဗစ် ဆိုတာက ကောလဟာလပါ။ တကယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါ။
မတ်လမှာလဲ Dr. Fauci က Lockdown လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုတာကို မလုပ်ခဲ့ပဲ အချိန်ဆွဲခဲ့သလို ဧပြီလဆန်းမှာ ဒီရောဂါဟာ အပူချိန်မြင့်တက်လာရင် ပီးသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ထို့အတူ Hydroxycholoquine သောက်ကြဖို့ ဆော်သြခဲ့ပီး သူကိုယ်တိုင်လဲ သောက်လို့ ရောဂါမကူးဘူးလို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ လိုက်သောက်ကြသူတွေ သေကုန်လို့ အမေရိကန်ဆေးပညာရှင်တွေက အဲဒီဆေးကို မသောက်ကြပါနဲ့လို့ အသိပေးခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ Mask မတပ်တာပါ။ အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ West Wing မှာ ပိုးတွေ့သူရှိတဲ့ တခါပဲ Mask တပ်ခဲ့သလို အခြားအနေအထားမှာ ၂ခါပဲ တပ်ခဲ့ပါတယ်။
မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာလဲ Mask မတပ်ခဲ့သလို Mask အမြဲတပ်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်း ဘိုင်ဒင်ကိုလဲ သူက ခနဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေကလဲ မတပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ လူ
သောင်းချီတဲ့ မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာ Mask မတပ်ပဲ သွားလာတာက ပြသနာရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Presidential Debate ကိုတောင် သူနဲ့ သူ့ဇနီးက Mask တပ်မလာခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီနောက် သူ့ရဲ့ ထိပ်တန်းလက်ထောက်တဦးမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှု စတင်တွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ Q ဝင်တော့မယ်လို့ သူက အသိပေးခဲ့ပီးနောက် ၂ နာရီအကြာမှာပဲ သူကိုယ်တိုင် ကူးစက်ခံလိုက်ရပီလို့ ထပ်မံကြေညာလိုက်ရပါတယ်။
သိပ္ပံအချက်အလက်တွေကို မယုံကြည်တဲ့၊ ဒီရောဂါဟာ ကောလဟာလပါဆိုတဲ့၊ Mask တပ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့၊ ခပ်ခွာခွာနေဖို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံး အမေရိကန်သမ္မတပါ ကူးစက်ခံလိုက်ရပါပီ။
ဒီလောက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံရသူတောင် ကူးတယ်ဆိုတော့ သာမန်လူတွေအတွက်တော့ ဆိုဖွယ်မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာက ပညာရှင်တွေရဲ့ စကားကို ခေါင်းဆောင်တွေက လိုက်နာလို့ အများကြီးတော်ပါသေးတယ်။
ဘရာဇီးသမ္မတ၊ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အိန္ဒိယ ဒုသမ္မတတို့ကိုလဲ ဒီရောဂါက တိုက်ခိုက်ပီးပါပီ။
ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲ Mask ကို အပြင်ထွက်ရင် တပ်ဖြစ်အောင် တပ်ပါ။ အိမ်က စထွက်တာနဲ့ တပ်သွားပီး အိမ်ပြန်ရောက်မှ ဖြုတ်ပါ။ လက်ဆေးပါ။
Mask တပ်ရင် နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကို လုံခြုံစွာ ဖုံးအုပ်ထားရမှာပါ။ Mask ကို မေးစေ့မှာ မချိတ်ပါနဲ့။ မေးစေ့မှာ ချိတ်နေမှာထက် စာရင် လုံးဝမတပ်တာက ပိုတောင်သက်သာပါသေးတယ်။
မေးစေ့ချိတ်ထားတာနဲ့ မတပ်ထားတာက အတူတူပါပဲ။ ဒီပိုးက မျက်စိ၊ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကပဲ ဝင်လို့ ဒီနေရာ ၃ ခုကို လုံးဝ ဂရုစိုက် ကာကွယ်ပါ။
ဒီပိုးဟာ ဟိုးထိပ်တန်းကနေ အောက်ဆုံးအထိ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ နိုင်ငံသားမရွေး၊ ရာထူးမရွေးပဲ ကူးစက်နိုင်လို့ သတိပြုပါ။
ကာကွယ်ဆေးမရမချင်း New Normal နဲ့ပဲ ဆက်လက်လည်ပတ်ရမှာမို့ အရေးအပါဆုံးဖြစ်တဲ့ Mask ကိုတော့ တပ်ဖြစ်အောင် တပ်ကြဖို့ အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ Mask မတပ်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်ကို ကိုယ်တိုင်ကူးစက်ခံလိုက်ရခြင်းနဲ့အတူ သင်ခန်းစာရရှိသွားပီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က သင်ခန်းစာယူကြပါစို့။
(၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ထရမ့်သည် ယခုအခါ အသက် ၇၄ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ ဇနီးကမူ ၁၉၇၀ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၆ ရက်က မွေးဖွားခဲ့ကာ ယခုအခါ အသက် ၅ဝကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။)
ဘယ်လောက်လှတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင်တော့
ဘယ်လောက် လှတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင် အတူတူပဲ ။ လှလှ မလှလှ.. ရုပ်ဆိုးဆိုး မဆိုးဆိုး ချီးမထွက်ရင်… တော်ပြီ။
ကိုယ်ဒွေ အတွက်တော့ ချီးမထွက်တဲ့ မိန်းမ က ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျ။ ခလေး မထွက်ခင်.. ချီး အရင် ထွက်တတ်တာကိုး🤮🤮။
မိန်းမ အများစု (တချို့မပါ )တူညီတဲ့ အချက်က ခလေးကလည်း မထွက်သေး ညှစ်ရတာလည်း အားကုန် မောပန်း ဗိုက်ကလည်း.. ရှယ် နာပြီးရင်း နာ အဲ့ အချိန်မှာ.. ကျိန်ဆဲပြီ ။
ဒင်း လုပ်လို့ ငါ့မှာ ဒုက္ခ တော်တော်ကြီးဒယ်.. ဒင်းကတော့ ဘယ်မယားငယ်ဆီ သွားနေလဲ မသိ … သေနာကြီး.. ဘာညာ ။ ကျနော်တို့ ကတော့ ရယ်နေလိုက်တာပဲ။
ဒါပေသိ.. ခလေး ထွက်ပြီး ခလေး ငိုသံ ကြားရပြီ ဆိုရင်တော့ သူတို့တွေ.. ပြုံးနေတော့တာပဲ ။ (အောက်က မွေးပေးရတဲ့ ကောင်တွေသာ ပေရေလို့) အမူးပြေတော့
ထန်းပင်ပေါ် မော့ကြည့်မှာလည်း ကိုယ်ဒွေက သိနေပြီးသား🤣🤣 ။မယုံမရှိ နဲ့ ကြုံဖူးတယ်။ မွေးကုတင် (မွေးစင်ပေါ်)မှာ ညှစ်ရင်း ညှစ်ရင်း မခံနိုင်တော့လို့ ဆင်းပြေးတာ..
မွေးခန်း အပြင်ကို ဖင် တုံးလုံး နဲ့… 😎😎 ကိုယ်ဒွေခမျာ လိုက် ဖမ်းရသေး… ပွေ့ ခေါ်လာရသေး.. ဇာတ်တွေလည်း နာရပါ့တော် ။
ဒီထက် ပိုနာတာ ရှိသေး.. မွေးခန်း တစ်ရက်မှာ… အဲ့ မွေးခန်းထဲ ယောက်ျား ဆိုလို့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း.. ကျန်တာ မိန်းခလေး တွေချည်းပဲ ။
အဲ့.. လူနာ တောင်းဆိုတာက တစ်မျိုး ယောကျာ်း ဆရာဝန် တစ်ယောက်လောက်.. သူ့ဘေးနား နေပေးပါတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ အမ.. ဆိုတော့ လက်လေး ကိုင်ထား ချင်လို့ပါတဲ့ ။
ဆရာ့ လက်လေးကို ကိုင်ပြီး ညှစ်ရရင် ခလေး မြန်မြန် ထွက်မှာ ကျမ သိတယ်တဲ့.. သေရော။ဆရာမ ကလည်း နေပေးလိုက်ပါ ဆရာရယ်.. သူစိတ်ချမ်းသာအောင်..
ကျမ အောက်ကနေ မွေးပေးလိုက်ပါ့မယ်တဲ့။ မယ်မင်းကြီးမ.. ကိုယ့်လက်ကို အတင်း ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်.. အားရပါးရညှစ်.. ကလေးလည်း ထွက်ရော ကိုယ့် လက်တွေလည်း ကျိုးမတတ်။
အတော် နာတဲ့ ဇာတ်.. ။တချို့ ကလည်း လာ..လာ ချည်သေး.. ဆရာ.. ပြန်ချုပ်နေပြီလား… ? …..ဟုတ် … ဘာလို့လဲ နာလို့လား အမ…! မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရေ…
ကျမ ဟိုဒင်းကို လှလှလေး ပြန်ချုပ်ပေးပါတဲ့… (လှနေတော့ရော.. ဘယ်သူက မြင်မှာမို့လည်းမသိ) ကိုယ်ဒွေကတော့ အာလူးဆာဝန်ဆိုတော့ ရှယ်လှသွားပြီ အမရေ.. လိုက်တော့ မကြွားနဲ့… ။
ဘော်ဒါ တစ်ဗွေ ရဲ့ မွေးခန်းထဲက ကမောက်ကမ အကြောင်း ပြောပြ ရဦးမယ်။ အဲ့ကောင်.. မွေးလူနာ ပေါင်ကြား ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး မွေးပေးရော.. ကလေးက ခေါင်းကြီးတော့ မွေးလမ်းကြောင်း ချဲ့ရတယ်။
ကလေးက အပြင်ရောက်.. အချင်း က ချပြီး .. အဲ့ ချဲ့ထားတဲ့ ဟာ ကို ပြန်ချုပ်ရတော့မယ် ။ ချုပ်ခါနီး.. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်တော်ချော က Saline နဲ့ အရက်ပြန်နဲ့ မှားဆေးမိရော။ လူနာခမျာ.. ထွန့် ထွန့် လူး 🥵🥵 လူနာက ထအော်ရော.. ….အမလေး ဆရာရဲ့… စပ်လိုက်တာ… မှုတ်ပေး ပါဦး.. မှုတ်ပေးပါဦးနဲ့… ဆိုပြီး။
အဲ့တော့မှာ အဲ့ကောင် သူအမှားသူသိ ပျာပျာသလဲ နဲ့ Mask ကြီး အောက်ဆွဲချပြီး… တဖူးဖူး နဲ့ မှုတ်ပါလေရော 😵😵 !
(ဒေါက်တာ တေဇကျော်… မေမြို့)
ပြန်ရဖို့ ရက်စေ့ပေမယ့် မပြန်ပဲ ဖောင်ကြီးမှာ လူနာတွေကို ပြုစုပေးနေတဲ့ သူရဲကောင်းလေး
သူ့နာမည်က ကျော်ကြားဟိန်းတဲ့ Positive လူနာပဲ။
ပြန်ရဖို့ ရက်စေ့ ပေမယ့် မပြန်ဘဲ ဖောင်ကြီး ခွာညိုဆောင်မှာ ရှိတဲ့ လူနာတွေကို ပြုစုပေးနေတဲ့ သူ။
ဒေါက်တာတွေ ကိုယ်စား သက်ကြီး ရွယ်အို Positive လူနာတွေ ရဲ့ ဝေယျာ‌ဝစ္စ အကုန် လိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ သူပါ။
ခွာညိုဆောင်ဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်း ဟိုဘက် ဒီဘက် လွန်ဆွဲရတဲ့ လူနာတွေ ပါ။
အခု မနက် ဒေါက်တာတွေ က သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ပြန်မလွှတ်ချင်ကြောင်းပြောတယ်…
တကယ့်တော့ ကျော်ကြားဟိန်းက ကျွန်တော့် တူအရင်းပါ။
ခွာညိုဆောင် မှာ ရှိတဲ့ လူနာရှင်တွေ သူ့ကို ဖုန်းတိုက်ရိုက်ဆက်ပြီး လိုအပ်တာကို အကူအညီတောင်း ‌နိုင်ပါတယ်နော်…
ဘဝ မှာ ကိုယ့်တူပါ ဆိုပြီး ပထမဦးဆုံး ဂုဏ်ယူရတဲ့ အခိုက်အတန့်ပါ။
သားကြီး ကျော်ကြား ဖောင်ကြီးကနေ မင်းတစ်ယောက်တည်း ပြန်မလာနဲ့ ရသလောက်၊ နိုင်သလောက် ဆွဲထုတ်ခဲ့ပါ …
ကိုဗစ်ကို အနိုင်တိုက်ပြီး ဖောင်ကြီး ခွာညိုဆောင်မှာ မှတ်တိုင်စိုက်ခဲ့ပါ
ကျော်ကြားဟိန်း – 09988763199
K S W – Yaung Chi ,Source ; မင်းရသ
ကိုဗစ်လူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တာမပြောပဲ ဆေးလာကုပြီး သေဆုံးမှပြောပြလို့ ဆရာဝန်အပါအဝင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း(၅)ဦး Quarantine ဝင်ရ
(၁-၁၀-၂၀၂၀) MoHSထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝေါမြို့နယ်မှ ပိုးတွေ့လူနာ ၂-ဉီးနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သည့် ဝေါမြို့နယ်၊ ချမ်းမြသာစည်ကွက်သစ်၊ ဆရာစံ ၂-လမ်းနေ အသက် ၂၉-နှစ် အရွယ် အမျိုးသားသည် မော, ရင်ကြပ်, အသက်ရှုမဝ ဖြစ်၍ ဝေါမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ (၂-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၃၃၀)နာရီအချိန်တွင် လာရောက်ပြသခဲ့ရာ သွေးပေါင်ချိန် စမ်းသပ်မရဘဲ သွေးလန့်သော လက္ခဏာများရှိနေသဖြင့် တာဝန်ကျဆရာဝန်/သူနာပြု/ဝန်ထမ်းများမှ အသက်ကယ်ဆယ်နိုင်ရေး ကြိုးစားကုသပေးခဲ့သော်လည်း နံနက်(၀၄၀၀)နာရီအချိန်ခန့်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးပြီးနောက်တွင်မှ လူနာမှာ ပိုးတွေ့သူ ၂-ဉီးနှင့် တစ်ရက်ခန့်ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါ သဖြင့် ဆရာဝန် တစ်ဉီး၊ အထက်တန်းသူနာပြု တစ်ဦး, သူနာပြု တစ်ဦး, ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး စုစုပေါင်း ၅-ဦး တို့အား Hospital Quarantine ထားရှိ၍ လိုအပ်သော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သေဆုံးသူသူနှင့် အနီးကပ် ထိတွေ့ခဲ့သူများအားလည်း Swab ယူ စစ်ဆေးသွားရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများတွင် မိမိတို့၏ ခရီးသွားရာဇဝင်၊ ပိုးတွေ့လူနာ/သံသယလူနာ တို့နှင့် ထိတွေ့မှုရှီခဲ့သည့် ရာဇဝင်တို့အား အမှန်အတိုင်း ပြောကြားကြပါရန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။
# Up to Date Channel